'I-job i-job' kusho uPitso kuHunt ngokuthatha umsebenzi weChippa
‘I-job i-job’ kusho uPitso kuHunt ngokuthatha umsebenzi weChippa
UPitso Mosimane noGavin Hunt
UPitso Mosimane uthi akamsoli uGavin Hunt ngokuvuma ukuyoqeqesha iChippa United ngoba ‘i-job i-job’. Lesi sisho sesimanje esithi ‘i-job i-job’ sichaza sisetshenziswa ukuchaza isimo somsebenzi ongemuhle kodwa owenza ngoba kufanele wondle izingane.
UHunt uthuse abaningi evumbuka kuleli qembu elidume ngokungabaphathi kahle abaqeqeshi nokusheshe libaxoshe uma izinto zibukeka zingahambi kahle. Ukuvuma kukaHunt kuphoxe abaningi.
Lokhu kungenxa yokuthi abaqeqeshi bakuleli base benqume ukuthi ngeke bavume ukuyoxhashazwa nguSiviwe “Chippa” Mpengesi ongusihlalo waleli qembu. Kodwa Impempe ithole ukuthi uHunt usayine inkontileka emvikelayo kwezinye izinto ezimbi elidume ngakho leli qembu.
UMpengesi naye uthe uHunt ngeke abe ngumqeqeshi ojwayelekile kodwa uzoba yimenenja. Lokhu kusho ukuthi uzonikwa igunya lokusayina abadlali abafunwa nguyena futhi anqume nokuthi bahola malini bese kuba nguye nophatha izindaba zeqembu.
“Ngiyamamukela umqeqeshi wethu… hhayi wothi ngilungise. Empeleni akayena umqeqeshi nje. Uyimenenja ngoba uza lapha nje uzele okungaphezulu kokuqeqesha iChippa. Uzele ukuzokwakha leli qembu,” kusho uMpengesi ngesikhathi ethula uHunt.
Noma kunjalo, uMosimane ukholwa wukuthi lena ‘i-job i-job’ kuHunt osale engesebenzi ndawo ngemuva kokuxoshwa yiKaizer Chiefs ngasekupheleni kwesizini edlule.
“Asikwazi ukukhetha imisebenzi (yokuthi siqeqesha kuphi) uma sisengabaqeqeshi ebholeni,” kusho uMosimane. Ubekhuluma nabeSouth African Football Journalists Association (Safja) ngoLwesithathu emini.
“Ngiyavumelana nesinqumo sikaGavin, yimpilo yasebholeni leyo. Kunjalo nje. Mina ngicabanga ukuthi ungomunye wabaqeqeshi abanempumelelo eNingizimu Afrika.
“Sengike ngabhekana naye kushiyana amaqhinga enkundleni sibuye sikwebhane lapho nalapho. Wenza umsebenzi omuhle kakhulu kwiWits. Wawinisa leli qembu ligi okokuqala eminyakeni ecela kweyikhulu (100).
FUNDA NALA: UKhenyeza ufunwa yiLeopards ukuzoyitakula ezembeni
“Umsebenzi wakhe uyazikhulumela. Buka nje izindebe aziwina neWits,” kuchaza uMosimane. Uthe nakwiChiefs besenethemba lokuthi uzosijika isimo uma iqembu selikwazile ukuphucula isikwati salo ngokusayoina abadlali abasha.
“Ufike kwiChiefs akwangahamba kahle futhi bengicabanga ukuthi uzothathwa kwiBafana Bafana uma sengikhuluma nje iqiniso… Bengithi bazomnika ithuba. Abantu bayakhuluma bathi ibhola alidlalayo alihambelani nesitayela seBafana .
“Kodwa angazi noma sidinga ukudlala kahle noma ukuwina yini kwiBafana. Namanje angilazi ibhola likaStuart Baxter. Uma sithi uGavin akanalo ibhjola elifanele iBafana, pho kungani uBaxter abuyela okwesibili (kwiBafana). Kodwa akudokwe ligayelwemina lelo.”
Previous Previous post: UKhenyeza angase anikwe owokubuyisa iLeopards ehlathini
Next Next post: ISekhukhune imgabhile uNtshangase obezicija nayo